ကြားသိရသမျှ Archives •
ထီဖွင့်ဖို့လည်းနီးလာခဲ့ပါပြီ….ဒါကြောင့် အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ ကို ဝေမျှပေးလိုက်တယ်နော်
29/10/2019 Yan Naing 0
ထီဖွင့်ဖို့လည်းနီးလာခဲ့ပါပြီ….ဒါကြောင့် အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ ကို ဝေမျှပေးလိုက်တယ်နော် ထီဖွင့်ဖို့လည်း နီးလာ ခဲ့ ပါပြီ…. ဒါကြောင့် အစွ မ်း ထက်မြက် တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာမ င်္ဂလာပါ သူဌေးမင်း ထီဆိုင် ကြီးမှ ကူးယူ ဖော်ပြ အပ်ပါသည် ။ အစွမ်း Continuous reading
(၁၈) လအတွင်း သိန်း (၁၅၀) စုနိုင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသူလေးရဲ့ ငွေစုနည်းလေးပါ
15/09/2019 Yan Naing 0
(၁၈) လအတွင်း သိန်း (၁၅၀) စုနိုင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသူလေးရဲ့ ငွေစုနည်းလေးပါ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသား အများစုက အိမ်က ပေးတဲ့ မုန့်ဖိုးပဲ သုံး၊ ကိုယ့်ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာ ဘယ်လောက်မှ မရှိသေးတဲ့အချိန်မှာ လိမ္မာပါးနပ်လှတဲ့ ကျောင်းသူလေးတစ်ဦးကတော့ ဒေါ်လာ (၂၀,၀၀၀) အထိ စုပြသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဗျာ။ သြစတေးလျ ကွင်းစ်လန်းမှာ နေထိုင်တဲ့ Continuous reading
ဗုဒ္ဓဘာသာ ( ၉ ) အိမ်သာရှိတဲ့ ရွာလေးမှာ မျက်စိမမြင်ဘဲ.. တစ်ပါးတည်း သီတင်းသုံးနေရတဲ့ ဘုန်းဘုန်း
14/09/2019 Yan Naing 0
ဗုဒ္ဓဘာသာ ( ၉ ) အိမ်သာရှိတဲ့ ရွာလေးမှာ မျက်စိမမြင်ဘဲ.. တစ်ပါးတည်း သီတင်းသုံးနေရတဲ့ ဘုန်းဘုန်း မျက်စိ လုံးဝ ကွယ်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့ လက်ဝဲကုန်းဘုန်းဘုန်းရဲ့ ဒုက္ခ က မသေးလှ ပါဘူး ဘုန်းဘုန်း လုပ်ချင်တဲ့ မိန့်ထားတာလေးတွေ သွားပို့တယ် ဆွမ်းချိုင့် ပါသွားတော့ Continuous reading
သောင်းကျန်းလွန်းတဲ့ ချစ်သူကြောင့် ခွဲစိတ်ထားသည့် ရင်သားပင် ပြုတ်ထွက်သည့်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီး….
13/09/2019 Yan Naing 0
သောင်းကျန်းလွန်းတဲ့ ချစ်သူကြောင့် ခွဲစိတ်ထားသည့် ရင်သားပင် ပြုတ်ထွက်သည့်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီး…. သောင်းကျန်းလွန်းတဲ့ ချစ်သူကြောင့် ခွဲစိတ်ထားတဲ့ ရင်သားပင် ပြုတ်ထွက်သည်အထိ ဖြစ်ခဲ့ရ။ ထိုင်းနိုင်ငံက အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ဟာ ဒေသခံ တီဗွီအစီအစဉ် တစ်ခုမှာ သူမရဲ့ အတွေ့အကြုံကို ပြန်လည် မျှဝေခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒါကတော့ သူမဟာ Continuous reading
ဓာတ်လှေကားထဲမှာ လူဆယ်ယောက် တစ်နာရီကျော်ကြာ ပိတ်မိပြီး ခြောက်ခြားထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်
07/09/2019 Yan Naing 0
ဓာတ်လှေကားထဲမှာ လူဆယ်ယောက် တစ်နာရီကျော်ကြာ ပိတ်မိပြီး ခြောက်ခြားထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ် ဓာတ်လှေကားထဲမှာ လူဆယ်ယောက် တစ်နာရီကျော်ကြာပိတ်မိနေခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံကြောက်လန့်တုန်လှုပ်ခဲ့ရတဲ့ Nway Htway Nway အကောင့်ပိုင်ရှင်ရဲ့ ဖော်ပြရေးသား အကြံပြုချက်များကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါသည်။ ဓာတ်လှေကား အလုံးပြုသူတိုင်း သတိရှိကြစေဖို့ နှင့် ဓာတ်လှေကား တည်ဆောက် အသုံးပြုသော Continuous reading
YBSယာဉ်မောင်းများကူရာမဲ့နေပြီလား ၁ ။ YBS စနစ်တွင်စပါယ်ယာမလိုအပ်ဘူး၊ ပြည်သူကလည်း စပါယ်ယာတွေအော်တာဟစ်တာ မခံနိုင်လို့ စပါယ်ယာမကြိုက် ၊ ဒါကြောင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမု့တွေ လုပ်ပေးခဲ့ရပါတယ် ၊ ဥပဒေအရ ၁၀ ပေကုန်ကားကစလို့ ယာဉ်အကူမပါရင် လမ်းပေါ်မထွက်ရ ဆိုသော်လည်း၊ အများဆန္ဒအရ ၄၀ ပေ ရှိတဲ့ ခရီးသည်တင်ကားများဟာ Continuous reading
တရားသူကြီး ဦးညိုထွေးကို လှောင်ပြောင်နေကြသူများ ဒီစာလေး ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
05/09/2019 Yan Naing 0
တရားသူကြီး ဦးညိုထွေးကို လှောင်ပြောင်နေကြသူများ ဒီစာလေး ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်ချိန်ချိန်မှာ အကြောင်းတစုံတရာကြောင့် ပုံစံတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ နာမည်ကြီးတတ်တဲ့ သာဓကတွေ ရှိတယ်။ ကောင်းတာဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ဆိုးတာဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ပေါ့။ ဥပမာ – ဟဲဟိုးလေဆိပ်မှာထင်တယ်။ ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာလက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ လေယာဉ်ပျက်ကျမှုမှာ သူ့ဘာသာသူ လမ်းပေါ် ဆိုင်ကယ်စီးနေတဲ့ ဦးပြားဆိုသူအပါအဝင် Continuous reading
လူမဆန်စွာ အကြိမ်ကြိမ် သားမယားပြုကျင့်ခြင်း ခံခဲ့ရတဲ့ ၁၇ နှစ်အရွယ် မိန်းမပျိုလေးရဲ့ အဖြစ်ဆိုး
လူမဆန်စွာ အကြိမ်ကြိမ် သားမယားပြုကျင့်ခြင်း ခံခဲ့ရတဲ့ ၁၇ နှစ်အရွယ် မိန်းမပျိုလေးရဲ့ အဖြစ်ဆိုး စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးမြို့နယ်၌ လူငယ်၅ဦးက အသက် ၁၇နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို လူမဆန်စွာ သားမယားအဖြစ် အကြိမ်ကြိမ် ပြုကျင့်မှု တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ကြားသိရသည် ။ ဖြစ်စဉ်မှာ ပြုကျင့်ခံရသူ အမျိုးသမီးသည် Continuous reading
လှပတဲ့ မိန်းကလေး တော်တော်များများ အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာကြောင့် ကံဆိုးနေတာလဲ … ။
24/08/2019 Yan Naing 0
လှပတဲ့ မိန်းကလေး တော်တော်များများ အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာကြောင့် ကံဆိုးနေတာလဲ … ။ ဒီကောင်မလေးနဲ့Facebook မှာ Fri ဖြစ်နေတာ အတော်လေးတော့ ကြာခဲ့ပါပြီ မှတ်မှတ်ရရ 2.နှစ် လောက် ရှိမလားပဲ။ သူမကြည့်ရတာ…အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင် ဇာတာကျနေပုံရတယ်တစ်ယောက်နဲ့မှ Anniversary အထိ မရောက်လိုက်ဘူးအချိန်တန်ရင် ပျက်သွားတာချည်းပဲရယ်။ Continuous reading
ကြောက်စရာ့ သန်းခေါင်ယံ (သို့) Taxi သမား တစ်ယောက်၏ ထိတ်လန့်ဖွယ်ဖြစ်ရပ်မှန်
27/07/2019 KPST 0
ကြောက်စရာ့ သန်းခေါင်ယံ (သို့) Taxi သမား တစ်ယောက်၏ ထိတ်လန့်ဖွယ်ဖြစ်ရပ်မှန် အထက် ပုဇွန်တောင် လမ်းမကြီး ၏တစ်နေရာတွင် ဖြစ်သည်။ဝေယံစိုးသည် သူ၏ Fielder တက္ကစီကား လေးအား ကားပါကင်ထိုးပြီး ခရီးသည်အား မျှော်နေမိသည်။ ခုတလော ကားဆွဲမကောင်းလှ။ထို့ကြောင့်ညဥ့်နက် ခံပြီးဆွဲနေရသည်။ တော်သေးသည်မှာ သူ့ကားက gas Continuous reading